Olee otú ị ga-esi bụrụ ezigbo onye ahịa na Amazon?
Onye ahịa ọ bụla na-ere ahịa n'Ịntanet na-enwe ọganihu n'esepụghị aka kwesịrị ịna-eme mkpebi naanị nke ọma. Ma mgbe ọ na-abịa nchịkọta njirimara ngwaahịa, na-agba ya na-enweghị ihe ederede data dị mkpa jikọtara ya na nghọta bara uru bara uru - agaghị enweta azụmahịa gị na-adaba na njedebe nke ọganihu ọ bụla nke na-aga n'ihu inweta ego. Ya mere, ka anyị chee ya ihu - ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ onwe gị dị ka onye ahịa oge buru ibu na Amazon na-erite uru site na ịbawanye ụba nke ndị ahịa na-azụ ahịa, ọ bụ oge dị oke mkpa ịchọtara ihe ntinye aka na ntinye aka nri na n'ikpeazụ nweta ngwaahịa gị nke kachasị mma - nokian plakok.
N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ike ịnweta n'elu ọchụchọ ọchụchọ ahụ. N'ikpeazụ, ị ga-agbanyekwu okporo ụzọ weebụ na ntanetịpụta ngwaahịa Amazon, nke nwere ike ịmalite ntụgharị ọganihu dị elu, ntụgharị na-enye gị ohere ịkwalite ọkwá n'ahịa ahịa ahụ dị oke egwu.
Ugbu a gini?
N'okpuru ebe a, m ga-egosi na ị bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma dị na ịnweta ohere dị ugbu a. Onye ọ bụla ahịa na-ere na Amazon kwesịrị ịma banyere nke ahụ, ejiri m n'aka. Cheta, Otú ọ dị, anaghị m achọ ịkwalite ma ọ̄ bụ Chineke n'ebughị ụdị ụdị software ọ bụla ma ọ bụ ngwá ahịa Amazon. Naanị ime ihe dị ka ezigbo onye ị ga-achọ ịkwado ụfọdụ n'ime ọganihu kachasị mma m nwere na gị. Biko na-ahụ n'anya na ihu ọma, m na-egosi ngwọta maka otu ahịa Amazon - SECockpit. K'anyị hụ ihe ọ bụ.
Ọ bụ ihe nyocha mbụ nke isiokwu m chọrọ iji nọchite anya gị maka taa. N'eziokwu, SECockpit abụghị naanị otu onye nyocha. Iji zuo oke, ọ bụ ọrụ ntanetị juputara na ntanetị ọ bụghị nanị maka Amazon, mana maka ịmechapụ ma eleghị anya ọ bụla echichi ngwaahịa na-edekọ na Ịntanetị ka a wee hụ ya n'etiti nsonaazụ ọchụchọ kachasị pụta.M na-ekwu na nke a na-ejikọta ya na ntanetị n'ụzọ zuru oke na ihe niile ị nwere ike ịchọrọ dị ka onye ahịa ahịa na Amazon.
Nke a bụ ụfọdụ n'ime uru ndị kachasị mma m nwere mmasị maka ndepụta ngwaahịa m:
na-agbanwe ngwa ngwa nke oke isiokwu nke nwere ike inweta mmeri;
ghọtara isi ihe nke ogologo oge ịchọta ịchọta ahịa ma nye aka na aro bara uru;
kpughere ohere kachasị mma na njirimara kachasị mma - na nghọta dị nro na isiokwu dị iche iche wetara kpọmkwem site na ndị na-ere ahịa na ngwaahịa gị ma ọ bụ niche ahịa na Amazon;
soro akara ọkwa dị ugbu a - ma arụmọrụ nke aka gị, na ọganihu kachasị mma nke ndị mmegide gị kachasị dị mma bụ ndị na-ama ọkwa nke ọma maka mkpụrụokwu ọbụla ọbụla ma ọ bụ otu njikọta ogologo oge;
na-enweta uru site na data nyochaa nke kachasị elu ma bụrụ nke a na-akwadoghị, ma ọ dịkarịa ala site na oge ikpe ikpe ụbọchị 30 dị na ịnweta ohere. O di nwute, iji nweta ihe ndi di elu karia ihe guzosiri ike, okwesiri igabiga usoro ntinye aha ha, ma n'ezie, kwụọ ego kwa ọnwa.